Asturcón, ilay soavaly vazaha teratany farany tany | Soavaly Noti
Teratany Asturias, Asturcón Anisan'ny hazakazaka izy io, tamin'ny andro taloha, nonenana ireo faritany izay miainga avy eo amin'ny tandavan-tendrombohitra Cantabrian ka hatrany Pyrenees.
Antsoina koa hoe pony Asturian, Izy io dia karazan-javamaniry madinidinika kely sy ambanivohitra, izay nitazona morphology tena mitovy amin'ny oviana ny hazakazaka dia nitsangana sahabo ho 2.800 taona lasa izay.
Nahita bebe kokoa momba ireo biby mahaliana antsika ve isika?
Ny Asturcón dia iray amin'ireo soavaly na soavaly kely antitra indrindra eto an-tany. Efa voaangona fijoroana vavolombelona izay miresaka momba azy ireo tamin'ny taona 80 a. C. taratry ny lanjan'izy ireo ho an'ny hafainganam-pandeha sy herim-po amin'ny ady, ankoatry ny fandehany malama.
Fomban-drazana izy ireo zatra manao asa fambolena, na dia niely sy ampiasaina amin'ny lahasa hafa aza ny hazakazaka. Tamin'ny taonjato faha-XNUMX Paris, ohatra, dia nampiasaina toy ny volavolan-tsoavaly ho an'ny kalesy kely.
Androany koa ny Asturcones dia niditra tao amin'ny fanatanjahan-tena Equine. Santionany maromaro amin'ity karazany ity no nahatratra ny tampony toy ny Tompondaka amin'ny ekipa soavaly amin'ny fomba maodely samihafa any Espana.
5 Fetiben'ny Asturcón
Miaraka amin'ny hahavony manodidina ny 125 cm., Asturcones dia fitoviana kely izay ny fijery ankapobeny dia ny an'ny a pony mahery vaika, mailaka ary mahatohitra, misaotra ny hozatra voafaritra tsara.
Ny lohany somary salantsalany misy mombamomba azy somary concave, manana handriny malalaka rakotry ny volo matevina; maso lehibe, mainty, velona; sofina kely sy be finday, ary vavorona sy vavorona.
Ny vozony somary tsara sy mifandanja dia mazàna mihorona amin'ny lehilahy lehibe. Izy io dia manana solomaso eo aloha, oval ary kely, raha ny ao aoriana kosa tena kely na tsy misy.
Ny vatana, an'ny esomary mitongilana ny spalda, toy ny rump, ary taolan-tehezana miforitra tsara, mijanona amin'ny rantsankazo manify kely sy somary boribory ary mahatohitra hoofs.
El volony amin'ity karazany ity dia matevina amin'ny manaikitra be bushy ary ambany rambo. Ny lokon'ny lambany dia mainty, na dia miovaova arakaraka ny fizaran-taona aza. Ny Asturcón dia zatra ny toetr'andro any an-tendrombohitra ary manarona ny vatany a palitao volo volontany matevina izay miaro anao amin'ireo singa amin'ny toetr'andro mangatsiaka.
Mikasika ny toetrany dia tena izy ireo mendri-kaja sy matanjaka. Nisy taloha sadaikatra izy ireo, mampiseho toetra tsara, mety ho an'ny ankizy. Equines izy ireo tena mahazo aina miaraka amina toetra tena tsara hitsambikina.
Ny fanamarihana ara-tantara dia manondro fa ny Asturcones dia efa mihoatra ny 2.000 taona. hitombo andinin-teny izay niresahan'ny Romanina ireo soavaly ireo ho isan'ny miaramila tamin'ny Empira Romana.
Mandritra ny Moyen Âge sy maoderina, ny asturcón tena zava-dehibe teo amin'ny toekaren'i Espana izany. Nalefa tany amin'ny firenena toa an'i Irlandy or France izy ireo izay nisintomany kalesy kely. Ankoatr'izay, mazava ho azy, amidy amin'ny faritra Espaniola samihafa ho soavaly fambolena.
Ity karazana angano ity dia voatahiry mandritra ny fotoana sy anio izy io dia iray amin'ireo mpandefa farany ny hazakazaka autochthonous any atsimon'i Eropa.
Ity karazana ity dia ampahany amin'ny fianakaviana lehibe misy soavaly kely na soavaly soavaly izay zaraina ao amin'ny Arc Atlantika, ny moron'ny morontsiraka ranomasina miainga avy any Portugal mankany Scotland ary misy an'i Spain, France, England, Wales ary Ireland.
Ankehitriny isika dia afaka mahita karazany sivy izay mitovy ny mampiavaka azy: Garrano, Pottok, Dartmoor, Asturcón, Exmoor, Wales, Shetland, Highland ary Connemara.
Fa ndao hiverina any Asturcón. Misaotra mipetraka ny faritra be tendrombohitra sy mikitoantoana ao Asturias, miaraka amin'ny fifandraisana sarotra mandra-pahatongan'ny taonjato faha-XNUMX, ny hazakazaka dia afaka niaro ny fahadiovany tamin'ny fisorohana ny lakroa izay nahatonga azy ireo hamoy ny toetrany ary, ho fanampin'izay dia nametra ny fanambarana sy fanondranana azy io.
Ny toe-piainan'ny toeram-ponenana namboarin'ireto mpitaingina zana-kazo ireto dia nanohana ny fisehoan'ny sasany amin'ireo singularities izay ananan'ny karazany, ohatra, ireo fantatra amin'ny fomba malaza "Corru." Paikady fiarovana vondrona amin'ny fonosana izay ipetrahan'ny Asturcones hiatrika ny fanafihan'ny amboadia izay nanenjika azy ireo tamin'ny fomba nentim-paharazana. Rehefa misy loza, dia vonona ny andian'ny soavaly anaty boribory misy rump ao anatiny ary mankany ivelany hiaro tena amin'ny tongony aloha. Ho fanampin'izay, mametraka izy ireo ny foy ao afovoany ny faribolana izay iarovana azy ireo indrindra.
Ankehitriny, Asturcones dia mbola miaina any an-tendrombohitra, na dia miompy aza ny fiompiana fiompiana izay voafantina ny santionany tsara indrindra, mankasitraka ny fivoarana sy ny faharetan'ny karazany.
Tonga niaraka tamin'ny lohataona ireo fanaterana. Rehefa vita ny fiterahana mandritra ny iraika ambin'ny folo volana dia misaraka amin'ny andiam-biby ny andy mba hitady toerana mangina sy azo ialana mba hiteraka ilay Asturcón vaovao. Saika saika matetika io zava-misy io dia tena haingana sy eo ambanin'ny fonon'ny alina, ka mampihena ny mety ho fanafihana.
Marika iray hafa amin'ny tanjaky ny hazakazaka ihany no izy sivy andro aorian'ny fiterahana dia lasa hafanana indray ireo mares, izay mitarika azy ireo hitaiza azy ireo matetika hatramin'ny faha-dimy amby roapolo taona.
Tamin'ny taona 80, fandraisana andraikitra tsy miankina sy fikambanana misongadina toa ny ANA (Fikambanan'ny sakaizan'ny natiora Asturian), miaraka amin'ny fampiroboroboana ny fanentanana ny tontolo iainana ny fotoana, Vitan'izy ireo ny nampijanona ny fihenan'ny fiompiana mampatahotra. ny Fikambananan'ny mpiompy kofehy Asturcón (ACPRA). Toa tsy ho ela ny fanjavonan'ny karazany nefa nahomby ny hetsika natao ary tafaverina ny karazany.
Ho famaranana ity lahatsoratra ity ary ho fahalianana hanadihady, hiresaka fety iray atao any Asturias manodidina ireo biby ireo izahay.
Ao amin'ny Majada de Espineres, eo afovoan'ny natiora (Sierra del Sueve, Piloña), misy festival izay mankalaza ny fanarenana ny soavaly Asturianina, ity teratany, bibidia ary ala ambanivohitra ity. Andro feno hetsika izao izay misongadina ny fampisehoana akanjo sy ny fampirantiana ireo karazan-tsarimihetsika anatiny izay samy mitaingina mpitaingin-tsoavaly sy mitaingina kalesy taloha.
Ny fety dia nambaran'ny tombotsoan'ny mpizahatany ao amin'ny Principality of Asturias.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Asturcón, soavaly eoropeana farany
Andao hiresaka momba an'i Jacas, soavaly ary soavaly